बिहान अबेरसम्म सुत्नु त सामान्य बानी नै भइसकेछ । त्यसपछि उठ्नेबितिक्कै मोबाईल हातमा लिएर नेट नचलाएसम्म त के नपुगेजस्तो हुन थालिसकेको छ । बिहान ब्रह्ममुहुर्तमा उठेर करदर्शन गरेर प्रक्रिती र ईश्वरप्रती अनुग्रहित भएर मात्र दिनचर्या अघि बढाउने चलन त प्राय : लोप भैसक्यो । अब त उठ्नेबित्तिकै नेट जडान गरेर त्यो पहिले हेल्लो भन्ने बक्सोमा टुङ तुङ् आवाज आएर कहलिएको सामाजिक सन्जालको उपस्थिती जनाउनै पर्‍यो । मेरोमा पनि त्यस्तै आवाज आयो र के अाइपुगेछ त भनेर हेर्दा एउटा साथीले मलाई प्रश्न पठाएको रहेछ । " शम्भु ! तिमीले यो च्याट फेस्बुक आदी बाट के असाधारण प्राप्त गर्यौ ? "
कस्तो गम्भिर प्रश्न ! एकाबिहानै गुरुको प्रबचनका दिब्यबाणि सुने जस्तो भयो । केही समय सोचमग्न भएँ । केही समय मौन रहेँ । केही बेर मनमा अशान्ति भयो । आफ्नै अन्तर्मनलाई प्रश्न गरेँ र उत्तरको आशा गरेँ । तर कतैबाट पनि मन शान्त पार्ने चित्त बुझ्दो उत्तर भने आउन सकेन । अनि बेवास्ता गरेर त्यस प्रश्नको उत्तरमा अल्झिन छोडेर नित्य कर्म गर्न लागेँ । स्नान गर्ने बेला पानी शरीरको धुलो पखाल्दै बगिरहेको थियो र दौडिदै स साना प्वाल भएको दुलोमा बिलिन भइरहेको थियो । साथमा २२ महिनादेखिका मेरा कृत्यहरू मानसपटलमा एक पछि अर्को गर्दै हत्तारिँदै ठेलम्ठेल गर्दै थिए । ब्यग्र मन लिएर फर्किएपछी दराजमा प्रतिक्षारत किताबमा दृष्‍टि पर्‍यो । अनि ती निर्दोष किताबहरुले गिज्याइरहेको जस्तो भान भयो । दिमागले त हिसाब पो गर्न थालेछ । सालाखाला ४ घण्टाका दरले २२ महिनासम्म हातका अौँलाहरु मोबाईलका बटन थिचेर धेरै नै तिखारिनुपर्ने हो । यसो औलामा हेरेको त उस्तै छन त ! न त स्नायुका तन्तु नै तिखरिए न त हात नै । कुनै रचनात्मक कार्यसिद्धी हुनसकेको भए सन्तोष मान्ने ठाउँ हुने थियो । यसो किताबका समिपमा गएर धुलो टक्टक्याउँदै एउटा पुस्तक निकाले र मुसार्न थालेँ । फेरि अर्को दिब्यज्ञान किताबका शुभरम्भमै आफ्नै अक्षरमै लेखिएको रहेछ । " कर्म बिनाको सपना फलिभूत हुँदैन । " त्यो सत्य अबचेतन मस्तिस्क बाट उत्खनन भएर बर्तमानमा मुल्याङ्कन गर्ने आधार बन्यो । सन्तुलन आबस्यक्ता हो । खानाको सन्तुलन ,मनको सन्तुलन ,आध्यत्मिक सन्तुलन ,सबै सन्तुलन हुन सकेमा सहजताका साथ जीवन डुंगा चलिरहन्छ । रमाइलो गर्नु र उद्देस्य प्राप्तिको पनि सन्तुलित कर्म हुनु अपरिहार्य हुन्छ ।
अब सुस्ताएका स्नायु कोशीकाहरुलाई जगाउन पर्ने बेला भएको महसुस भयो । हासिमजाक र च्याट्को अद्रिश्य आकर्षणबाट टाढा हुनुपर्ने देखिएको अनुभब भयो । नभए समयले राम्रो पाठ सिकाउनेछ जुन बेला म PG चोकमा उभिएर समकालीन साथीहरु एउटा एउटा बाटो हिंडेर त्यो चोकलाई केही बर्ष पछि छोडेको हेर्नुपर्नेछ । कुनै बेला त म जान्ने ब्यक्ति भनेर रमाएर बस्नु भनेको अतितको उपलब्धिमा रमाउनु हो । जुन कुरो समयले धेरै पछाडि छोडिसकेको हुन्छ । जे होस् दिब्यज्ञान प्राप्ति भएको यो छाप रहिरहोस् भन्ने दुर्गा माता बाट बिजया दशमीमा कामना गर्दछु ।
समय : २०७३असोज २२ गते
७ बजे बिहान